အဘယ်သူသည်သီချင်းစာသားနှင့် Stas Mikhailov များအတွက်သီချင်းဂီတရေးသားခဲ့သည်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်သူသည်သီချင်းစာသားနှင့် Stas Mikhailov များအတွက်သီချင်းဂီတရေးသားခဲ့သည်?
အဖြစ်ဝေးငါသိသကဲ့သို့, သူရေးသားခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သီချင်းတွေအများစုသူသညျမိမိစာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူကအနည်းငယ်ရေးသားခဲ့သည်ရှိမရှိမပြောလိမ့်မည်ဟုမဆိုကွန်ကရစ်ယခုမည်သူမဆိုအတူအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်။ ဒါပေမဲ့အဟောင်းအတိအကျကိုယ်တော်တိုင်။
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဤအနုပညာရှင်မကြိုက်ဘူးသော်လည်းငါ့အမြင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်အလုပ်လုပ်စာရေးသူကိုရှာဖွေကြိုးစားမှု, မအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီ။ အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေခုနှစ်, Stas Mikhailov ကိုယ်တော်တိုင်ကသူတို့သီချင်းတွေကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။ နှင့်အများစု၏စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,212 စက္ကန့်ကျော် Generate ။